हिटलहरको यौन जीवन « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं । तानाशाही हिटलरको जन्म अप्रिल २० मा भएको मानिन्छ । हिटलर क्रुर थिए।
अमेरिकी एक संस्थाको एक रिर्पोट अनुसार यौन आशक्त थिए। हिटलरका बारेमा केही यस्ता कुरा छन् जो तपाइलाई विश्वास नै नलाग्न सक्छ। एक इतिहासकारले उनको बारेमा लेखेको जीवनीमा हिटलरले वेश्यावृत्तिमा लागेका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध बनाउने गरेको उल्लेख छ।
कम उमेर र किशोरीसँग यौन सम्बन्ध राख्न उनी उत्साहित हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। उनले आफ्नो यौन इच्छा पुरा गर्नका लागि विभिन्न अभिनेत्रीलाई आफूसँग बोलाउथे । केही पत्रपत्रिका र वेबसाइटमा प्रकाशित समाचारका अनुसार हिटलरले सेक्सका लागि अनौँठा अनौँठा हर्कत गर्ने गरेको जर्मनकी एक अभिनेत्रीले खुलासा गरेकी थिइन्।
तर उनको १९३७ मा भर्याङबाट लडेर मृत्यु भएको थियो। हिटलरका बारेमा यस्ता समाचार पनि प्रकाशित भएका थिए की उनले पुरुषसँग पनि यौन सम्बन्ध बनाउने गरेका थिए। उनी समलिंगी भएको बताइन्छ। एक मिडिया रिर्पोटका अनुसार हिटलर र उनका पुरै सेना समलिंगी भएको मान्न सकिन्छ।
उनका जीवनीमा आधारिक केही पुस्तकमा पनि उनी समलिंगी भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को रहस्य के थियो भने हिटलरले बच्चाहरुसँग पनि यौन सम्बन्ध राख्ने गर्थे । यहाँ सम्मकी उनले आफ्नै भतिजीसँग पनि यौन सम्बन्ध राखेका थिए। पछि यो रहस्य बाहिर आउने खतरा भएपछि उनले आफ्नौ भतिजीको पनि हत्या गरेका थिए।
बाबुरामको आरोप : सत्तासिनहरु सिंहदरबार र बालुवाारमा कमिसनको भागबण्डामा व्यस्त छन्!
काठमाडौं, ११ असोज । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तासिन भएकाहरु
सांसद तथा उद्योगी श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, ११ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगी उमेश श्रेष्ठलाई कोरोना